मंसिरमा चुनाव छ रे हो ? १५ सालदेखि भोट हालेँ खै के र !
शान्ति थापा –
म ९० सालको भूकम्प जाँदा १० महिनाकी थिएँ । जन्मेको चाहिँ बनेपा घोगेचौर बस्नेत गाउँमा हो । अहिले त्यहाँ अस्पताल बनेको छ । ६ जना बामध्ये म माइलाको छोरी । बुवा रोपलाइनको चेक गर्ने सुबेदार हुनुहुन्थ्यो, त्यतिबेला रोपवेबाट भारी आउँथ्यो नि त !
देशमा नेताको कारणले धेरैले दुःख पाए । बेला बेलामा हुने आन्दोलन, लडाई र हिंसाका कारण धेरै नागरिकले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ , कतिले त आफन्तलाई गुमाउनु पनि परेको छ । म पनि त्यही दुःखी हुँ मैले पनि २००७ सालको क्रान्तिको बेला, दाजु भाइ, मामा छोरा, आमा ज्यूको श्रीमान् लगायत ११ जना आफन्तलाई गुमाउनुपर्‍यो ।
२००७ सालको बेला रुख रुखमै झुन्ड्याएर मार्थे । त्यत्तिबेला मारिएकाहरुको किरिया कर्म गर्नसमेत दिएन आर्मीमा हुनेहरुलाई । अहिले आफ्नै स्वार्थको लागि लड्छन्, तपाई हामीले दुःख नगरी खान पाउने होइन, अझै यिनैलाई भोट दिनुपर्ने, मैले २०१५ सालदेखि नै भोट दिएको दिएकै छु । कतिपटक दिएँ मलाई नै थाहा छैन । २०१५ सालको चुनावमा त भोट नहाली नहुने भनेपछि म बिरामी मान्छेलाई समेत डोर्‍याएर लगेको याद छ, चुनीखेलको त्यो डाँडामा गएर भोट हालेको थिएँ । यो दिन मलाई बेसरी ज्वरो आथ्यो, अनि भोट नहाली हुँदैन रे भनेपछि अरुले नै लगेको मलाई याद छ ।
त्यो बेलाको मतपेटिका चाहिँ ठूलठूला काठको हुन्थ्यो, यस्तो टीन सीनको जमाना थिएन । उ बेला त सन्तुस, खुत्रुकेको चल्ती थियो । भोट हाल्ने मान्छे थोरै हुन्थे अहिलेको जस्तो भीड चाहिँ हुदैनथ्यो । त्यतिबेलाको चुनाव चिन्ह सबै सम्झना त छैन तर लालटिन या लाइट जस्तो त्यस्तै त्यस्तै थियो ।
त्यतिबेलाका नेता पनि अरुलाई कल्याण गर्ने भन्दा पनि आफ्नै दुनो सोझ्याउने खालका थिए । आफ्नै लागि मात्रै सम्पत्ति जोरौं भन्ने खालका थिए । मैले त ‘प्रधानपञ्च, केटाकेटी बुढाबुढीको सप्पै खाउ भन्छ’ भन्ने गीत नै बनाएको थिएँ । प्रधानपञ्च भएर के नै ग¥यो त खै, झन् महँगो भयो, सस्तो भन्या कुनै चीज भएन, अनि गरिबको लिएर धनीलाई नै पोस्थ्यो, त्यो पनि कही धर्म हुन्छ ? राणा त झन काना, आत्मा त एउटै हो नि त्यस्तो गर्न हुन्छ त ?
अहिलेका नेता पनि उस्तै हुन् । कुनै नेता मन परेको छैन । अहिले पनि चुनाव छ रे मंसिरमा हो ? अब हाम्रो कुरा त कसैले पनि खाँदैन, हामीले भोट हाल्नु पनि पर्दैन । रहर पनि लाग्दैन, कर पनि लाग्दैन । अब किन नदुख्या गोडा दुखाउनु पर्‍यो र ? हिँड्नसम्म हिँडिहाल्यो, भोट हाल्नसम्म उहिल्यै हालि हाल्यो भोट हालेर के हुन्छ र अब ? मलाई त बरु भजन मन पर्छ, बिहान बेलुका भजन सुन्छु, गाउँछु् ।
पशुपतिको चारै ढोका गुहेश्वरीको दैलो, आर्यघाटमा स्नान गर्दा जाओस् मनको मैलो
भजाैँ राधेश्याम भजौं राधेश्याम, जिन्दगीको भर छैन भजौं राधेश्याम
कोही भन्छन् रामै राम कोही भन्छन् श्याम, कैलाशमा शिव बस्छन् कृष्ण कृष्ण नाम
भजाैँ राधेश्याम कृष्ण भजौं राधेश्याम, जिन्दगीको भर छैन भजौं राधेश्याम